VIDEO: Qayla-dhaan isqabsatay deegaamada Puntland iyo digniin loo diray xukuumadda.
July 21, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (Garoowe)-Qaylo dhaantii ugu cuslayd ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka soo yeeraysa qaar kamid ah magaalooyinka waaweyn, degmooyinka, tuulooyinka iyo dhulka xoolo daaqeenka ah ee Puntland.
Qayla dhaantaani ayaa waxa ay salka ku haysa cabasho xoogan oo waxgaradka iyo maamuladu ay ka muujinayaan maandooriyaha Khamriga iyo Xashiisadda oo tusbax afka laga furay ku soo noqotay inta badan deegaamada Puntland ee xuduudka kuyaalla.
Waxgaradka deegaamadaasi ayaa waxa ay sheegeen in isticmaalka maandooriyaha Khamriga iyo Xashiishaddu ay si xowli ah u soo gelayaan miyi iyo magaalo isla markaana ay noqdeen balwad dhalinyaradii deegaamadaasi si caadi ah xilligaan ula sii qabsanayaan waxka qabashana u baahan.
Dowladda iyo dhammaan bulshada qaybeheeda kala duwan ayaa laga codsanayaa inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa arrintaani oo haddii aan laysu taagin sababi karta in mustaqbalka dhaw ay gaarto meel aan laga soo laaban karin.
Culimada deegaamada Puntland waxa ay sheegeen in xaaladdu ay kasii darayso iyagoona ku eedeeyey rag shaarka dowladda gashan inay gacan ka geysanayaan soo dejinta maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa guud ahaan deegaamada Puntland sida ay hadalka u dhigeen.
Daniel Zinjibaari oo
ah governatoraha Puntland ayaa ka mid ah gansatada mukhaadaraadka keenta dhalinyaradii miyi iyo magaalo waa wada sakhraan,” nafeey nin ku doonay ku waa!”